Caafimaadka - Horn Future
22 January 2018, 3:17 am
Luknow (Horn Future)-Waxa dalka India ku dhintay ugu yaraan 64 carruur ah dhakhtar ku yaal gobolka waqooyi ee Uttar Pradesh todobaadkii hore,taasoo keentay in warbaahinta guduhu ku eedeeysay dhimashadan iyada oo aanan la helin sahayda lagu neefsado ee loo yaqaano (oxygen)ka sida ay sheegtay warbaahinta caalamku. Kuliyadda Caafimaadka ee (BRD Medical College) ee degmada Gorakhpur […]
Khudaarta India oo si qarsoodi ah loogu buufiyo kimiko waxyeello u gaysata kalyaha+ daawo
Delhi(Horn Future)-Qaar kamid ah dadka ka ganacsada khudaarta iyo beeralayda India oo muuqaalkan video ga ah kasoo muuqday ayaa waxa ay ka sheekaynayaan sida khudaartan ay ugu buufiyaan ama ugu muddaan kimikada iyo halka ay kasoo iibsadaan kimikadan iyada oo ay tilmaameen ujeedada ay ka leeyihiin inay tahay si qaradeedu ay u waynaato ama ay […]
Daraasad cusub oo Maraykan ah ayaa kusoo gabagabeeysay in cunista hilibka ka badan ee casaanka ah uu xidhiidh lala leeyahay halista korodhka dhimashada ay sababaan 8 nuuc oo ah cudurada caadiga ah, oo ay ku jiraan kansarka, macaanka,cudurada wadnaha,iyo sidoo kale dhamaan cudurrada sababa dhimashada. Cilmi baadhayaasha daraasadan ayaa waxa ay dabo-gal ku hayeen caadooyinka […]
London –Daraasad cusub oo British ah ayaa sheegtay in helitaanka hurdo ku filan habeenkii bini’aadanka ay kordhiso quruxda wajiga iyo soo jiidashadiisa,marka la barbardhigo qofka seexda dhowr saacadood kaas oo soo jiidashadiisu ay ka yar tahay dhinac dadka kale. Daraasadan ayaa waxa sameeyeen cilmi- baadhayaal ka tirsan jaamacadda Liverpool ee British ka ah, taas oo […]
Waaxda baadhitaanka badeedacaha ee Germany ayaa ka digtay cuntada qureecda la cuno ee ka sameeysan midhaha heeda iyo qamadida iyo maraqa hore diyaariyay . Waxa waaxdani war bixin ay soo saartay kaga dhigtay inay dhici karto in cuntootinkan ay noqon karaan bambooyin sonkor ah oo dhab ah,kuwaas oo ay ku jiraan tiro badan oo sonkor […]
Daraasad cusub oo Mareykanka ah ayaa daaha ka fayday in cabitaanka 1 qaruurad/dasaad ugu yaraan maalintii ee ah cabitaannada gaaska leh oo xataa ay ku jiraan kuwa uu hooseeyo-(calories) kooga, ama wax loo yaqaano “diet”ka ay dedejiyaan gabowga maskaxda iyo inay kor u qaadaan halista cudurka ( stroke)ga ee ah xanuunka kadisk ah ee ku […]
Bruxelles(Reuters)-Waaxda dawooyinka ee Yurub ayaa ku talisay in la joojiyo oggollaanshaha in ka badan 300 oo dawooyin ah oo (diyaar u ah in la soo saaro ka dib markii ay dhamaatay muddada oggollaanshaha ee curintooda) sababo la xidhiidha tijaabooyin “dayac” ah oo ay sameeysay shirkadda( Micro Therapeutic Research Labs) ee India laga leeyahay. Go’aanka waaxdan […]
Kenya oo damacsan in ay kasoo kireeysto 500 oo dhakhaatiir ah dalka dariska ah ee Tanzania
NAIROBI-Dalka Kenya ayaa qorsheeynaya in uu kasoo kireeysto 500 oo dhakhaatiir ah dalka dariska ay yihiin ee Tanzania ka dib shaqo- joojintii dhakhaatiirta Kenya ee 3 bilood jirsatay taas oo dhamaatay horaantii toddobaadkan,sida ay ku dhawaaqeen saraakiisha dalkaasi. Madaxwaynaha Tanzania John Magufuli oo uu marti u ahaa wasiirka caafimaadka ee Kenya Cleopa Mailu ayaa sheegay […]
Daraasad cusub oo British ah oo sheegtay in Salaaddu ay yareeyso xanuunadda dhabarka
London –Daraasad cilmiyeed cusub ayaa sheetgay in dhaqdhaqaaqa joogtadda ah ay sameeyaan Muslimiintu inta lagu jiro salaadda in ay yareeyn karaan laxowga/xanuunka qabyta dhabarka ugu hoseeysa,waxana sido kale ay kordhiyaan dabacsanaan xagga kala goysyadda , haddii si fiican loo sameeyo. Daraasadan oo wargeyska «The Independent» ee British ka ah uu kasoo xigtay Majalladda Caalamiga ah […]
97 dhalinyaro ah ayuu haleelaa cudurka dilaaga ah ee HIV/ADIS maalin kasta dalka Kenya
Nairobi-Golaha Qaranka Kenya ee La-dagaallanka cudurka HIV/AIDS ayaa waxa uu daaha ka fayday in isku celcelis heerka dhalinyarada ee uu haleelo virus ka “HIV” ee sababa burburinta unugyada difaaca ee jidhka bini’aadanka ee “AIDS”, ay gaadho 97 dhalinyar ah maalintii. Agaasimaha Golaha Qaranka Dr. Nduku Kilonzo ayaa war saxaafadeed ku sheegtay in 71 kun iyo […]
London(Sunday Times)-Saynisyahano iyo dhakhaatiir British ah oo ka kooban 5 jaamacadood oo ah kuwa haybadda leh ee dalka Britain ayaa waxa ay ku dhow yihiin in ay gaadhaan dawo kama dambays ah oo la siiyo dadka qaba cudurka HIV (AIDS). Nin British ah oo da’diisu lagu sheegay 44- jir ayaa u dhow in uu noqdo […]
Cunista cashada ee habeenkii milayyada dambe wax ay waxyeello u gaystaa caafimaadka wadnaha
Khubarada ayaa waxa ay talisay baahida loo qabo in la cuno cashada ka hor 7 fiidnimo habeenkii, waxana ay ka digeen cunsita cashada ee milayyada dambe ee habeenkii taasoo waxyeello u gaysan karta caafimaadka wadnaha in ka badan cunista cuntada ay ku jirto tirada badan ee cusbadu. Kooxo ku takhasusay wadnaha oo Turkish ah ayaa […]
Soonka habeenkii waxa uu ka hortagaa kansarka naasaha ku dhaca
Daraasad cusub oo Mareykanka ayaa sheegtay in soonka laga soomo cuntada habeenkii in ka badan 13 saacadood ay noqon karto istaraatijiyad fudud oo wax ku ool ah oo ay dumarku iskaga ilaaliyaan in uu haleelo kansarka naasaha.Marka loo eego ujeedada daraasadan laga leeyahay in habeenkii la soomo habeenkii ayaa ah in la fogaado cuntada kaliya […]
Iska ilaali isticmaalka joogtada ah ee bootar ka (talcum) waxa uu sababaa kansarka ku dhaca xubinta taranka haweenka
Daraasad cusub ayaa lagu ogaaday in haweenka si joogta ah ugu isticmaala bootar loo yaqaano (talcum powder)xubintooda taranka ay yihiin kuwo aad ugu nugul sadex laab in uu haleelo kansarka ku dhaca xubinta naalada ilmuhu ka abuurmo ee haweeynada. Warbixintan oo ay daabacday wakaalada «Reuters» oo la xidhiidhay cilmi baadhista cudurada ayaa sheegtay in daraasaddani […]
Daraasad caafimaad oo dhawaan la soo saaray ayaa waxa ay muujisay in shucaaca iyo gariirka telefoonka mobile ku uu saamayn ku yeelan karo taranka ragga, waxana uu keenaa in uu burburiyo noolaha shahwada/manida jidhkiisa ku jirta, taasoo ka hortaggta dhalmada ,yareeysana tarankiisa. Sida laga soo xigtay daraasad ay soo saartay jaamacada “Teknion” ee kutaala Xaifa […]
Wajiga oo la maydho subax iyo habeen maalin kasta waxa uu ka mid yahay waxyaabaha aasaasiga ah ee daryeelka jidhka, laakiinse in la sameeyo arrinkaasi milayga jidhka la maydhanayo waxa ay kordhisaa burburinta jidhka waxana ay ka dhigtaa wajiga midab aanan dhalaalaynin, sida laga soo xigtay wargeyska “Daily Mail”. Kaye Scott oo ku xeel-dheer daryeelka […]
Geneva-Ururka Caafimaadka Adduunku OMS/WHO ayaa waxa la kulmi doona gudiga xaaladaha deg dega ah ee Geneva jawaabta caalamku uu ka bixiyay virus Zika ee ka dillaacay Isniintii 1 February,kaasoo lagu qiyaasay in uu kor u kacayo 4 malyuun oo xaaladadood dalalka America 12ka bilood ee soo socda. Sanadkii la soo dhaafay ayaa virus kan laga […]
Cilmi baadhayaal Maraykan ah ayaa daraasad ay sameeyeen kusoo gunaanaday in sonkortu ay saamayn ba’an ku leedahay caafimaadka oo inta badan dadku aynan u maleeyeenin,tasoo ay dhici karto in sonkortu ay kordhiso halista kansarka naasaha iyo sanbabada. Sida laga soo xigtay website ka “Oogspergh Allgemeine” daraasadan ayaa waxa sameysay Jaamacadda Texas taasoo lagu daabacay majjalad […]
Daraasad cusub oo dhawaan lasoo saaray ayaa waxa ay ku soo gunaanaday in cabitaanka sonkorta leh sida cabitaanka gaaska leh ee maalin kasta la cabo in uu keeni karo in baruurtu ay ku ururto dhexda iyo caloosha. Xeeldheerayaashan ayaa waxa ay sheegeen xidhiidhka ka dhexeeya baruurta caloosha ku wareegsan iyo xubnaha gudaha ee jidhka, sida […]
London-Wargeyska (Daily Mail)ee British ka ah ayaa sheegay in Britain ay tahay dalka ugu horeeya ee ku tiirsan dhakhtarrada ajnabiga ah ee ku dhashay dalka dibadiisa marka la barbar dhigo dhigeeda dalalka kale ee Midowga Yurub. Daraasadan ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in in ka badan saddex meelood meel ka mid ah dhakhaatiirta British […]